BQ Aquaris X Pro, astaamaha mobiilkan oo wata Android 7.1 | Androidsis
BQ Aquaris X Pro, cusub oo ka yimid BQ bartamaha-dhexaadka
Mailen bravo | | Bq
Shirkadda soo saarta mobilada ee BQ ayaa ku dhawaaqday laba aaladood oo cusub si ay u sii wadaan u tartamidda si xoog leh qaybta sare ee dhexe ee mobilada Android. Mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ayaa ah BQ Aquaris X Pro, kaas oo la yimaada a kamarad weyn oo leh tiknoolajiyada Dual Pixel, Qalabka oo ay weheliso dahaadh bir ah, qalabku waa mid qurux badan oo la heli karo.
Fuula a 5,2 inch screen oo leh xalka buuxa ee HD (1080 x 1920 pixels), oo ku habboon in lagu ciyaaro nuxurka maqalka leh heerar faahfaahsan oo heer sare ah. Dhinaca kale, gudaha waxaan ka heli doonnaa processor Qualcomm Snapdragon 626, 4 GB RAM iyo Adreno 506 graphic chip ah oo lagu maamulo ciyaaraha iyo barnaamijyada iyada oo aan la gaabin.
BQ Aquaris X Pro, mobiil awood badan oo dhinacwalba leh
Soo-jeedinta BQ ee Aquaris X Pro waa mid hami leh. Si xarrago leh ee naqshadeynta leh sanduuqa birta iyo awoodda gudaha, waa inaan ku darnaa laba nooc oo lagu keydiyo gudaha. Mid ka mid ah 64 iyo kan kale ee 128 GB, oo labadaba lagu ballaarin karo kaararka microSD illaa 256 GB.
Kamaradda ugu weyn ayaa ah barta adag. Aquaris X Pro wuxuu leeyahay a Qalabka Samsung ee leh tiknoolajiyada Dual Pixel oo leh fur f / 1.8 iyo 12 megapixels. Sawir qaadideeda oo tayo sare leh waxay ka timaadaa tikniyoolajiyadda sawirka Samsung, oo la mid ah Samsung Galaxy S7. Dhinaca kale, dareemaha hore waa 8 megapixels oo keliya.
BQ Aquaris X Pro sidoo kale wuxuu la yimaadaa isku xirnaanta heerka koowaad: 4G, LTE, Bluetooth 4.2 iyo NFC. Waad ku mahadsan tahay batari 3100 Mah, waxay damaanad qaadeysaa dhowr saacadood oo ismaamul ah waxayna si buuxda uga faa'iideysaneysaa isku xirnaanta Android 7.1, oo ah nooca ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka Google.
Qalabka cusub ee BQ ayaa laga heli doonaa bisha Juun dukaamada Isbaanishka. Isaga sicirka bilowga wuxuu noqon doonaa 360 euro oo ah nooca 64 GB iyo 400 euro oo loogu talagalay moobilka 128 GB. Sida guryaha, waxaa lagu heli doonaa madow iyo caddaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Bq » BQ Aquaris X Pro, cusub oo ka yimid BQ bartamaha-dhexaadka
Abka ugufiican ee lagudiyaar garoobo Had iyo jeer On the Galaxy S7
Heerarka qoraalka waxay ku noqdaan WhatsApp